Raran-drà italiana- Ahoana ny fampiasana izany ho an'ny zom-pirenena amin'ny fiaviana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Raran-drà italiana- Ahoana ny fampiasana izany ho an'ny zom-pirenena amin'ny fiaviana
Nanjary nalaza tato anatin'ny taona vitsivitsy ny foto-kevitry ny zom-pirenena amin'ny fiaviana. Ny Amerikanina mitady ny fakany any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao dia maniry ny hamerina azy ireo ary hanomboka fiainana any amin'ny tany niaviany. Italiana dia isan'ny toerana malaza manolotra safidy Jure Sanguinis na zom-pirenena amin'ny fiaviana. Raha azonao atao ny manara-maso sy manamarina ny razanao ao amin'ny firenena, dia manan-jo hitaky zom-pirenena ianao. Ny ampahany tsara indrindra dia ny fanombohana fotsiny satria afaka mampita ny havanana amin'ny taranaka manaraka ianao.
Toa tsara ny safidy hanombohana ny dianao amin'ny fifindra-monina, saingy mila mahatakatra zavatra vitsivitsy ianao alohan'ny handehananao. Ianao dia afaka vakio ity torolàlana feno ity raha te hanomboka ny fizotran'ny fangatahana ianao ary angataho ny zonao. Ny razanao dia afaka miasa amin'ny sitrakao, koa ataovy izay hampiasanao izany ho tombontsoanao. Avelao izahay hanazava ny fomba ahafahanao manararaotra izany hahazoana zom-pirenena Italiana amin'ny fiaviana.
Fantaro ny fitsipika momba ny eligibility
Ny zom-pirenena italiana amin'ny fiaviana dia azon'ny mpangataka amin'ny alàlan'ny razambeny, tsy misy fetra amin'ny isan'ny taranaka. Midika izany fa azonao atao mangataka amin'ny ray aman-dreninao, raibe sy renibe, raibe sy renibe, sy ny sisa. Ireto ny fitsipika tokony arahinao mba hametrahana fitakiana:
Raha teraka avy amin'ny ray aman-dreny italiana ianao na natsangana ho tsy ampy taona (taona latsaky ny 21 taona dia raisina ho tsy ampy taona raha raisina alohan'ny 1975 ary latsaky ny 18 raha raisina aorian'ny 1975)
Ny ray aman-dreny/razambe italiana dia tsy tokony naka zom-pirenena tamin'ny alalan'ny fanomezan-janaka tany amin'ny firenena hafa rehefa teraka ny zanany
Ny razana dia tokony ho olom-pirenena italiana taorian'ny firaisan'ny firenena tamin'ny 1861
Fantaro ireo maningana
Ny fahazoan-dàlana amin'ny lalana dia toa tsotra toy ny teraka tamin'ny ray aman-dreny italiana. Saingy misy maningana sasany amin'ny fitsipika. Raha tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo sokajy ireo ianao dia tsy maintsy mitady fomba hafa hampiharana. Ireto ny maningana amin'ny fitsipika ankapobeny:
Ny razambe teratany italiana dia teraka talohan'ny 14 Jona 1912
Teraka tamin'ny vehivavy italiana ianao talohan'ny 1948
Te-hitaky amin'ny alalan'ny tsipika reny ianao, miaraka amin'ny vehivavy ambony teraka talohan'ny 1 Janoary 1948
Ny vehivavy italiana dia tsy navela handalo ny zon'izy ireo zom-pirenena talohan'ny 1948, ka nahatonga ny lalàna hanavakavahana. Ny fanitsiana manaraka dia mamela ireo mpangataka toy izany hampihatra amin'ny alàlan'ny dingana ara-pitsarana eo ambanin'ny fitsipika 1948.
Mijanòna mandroso miaraka amin'ny antontan-taratasy
Raha mahafeno fepetra amin'ny lalana ianao dia afaka mandroso amin'ny dingana. Saingy misy dikany ny manomboka amin'ny fanangonana antontan-taratasy satria mila lisitra lava ianao amin'ny dingana. Voalohany indrindra dia mitaky ny taratasy fanamarinana ny fahaterahana, ny fahafatesana, ny fanambadiana ary ny maha-olombelona ianao mba hanamarinana ny fifandraisan'ny razanao. Mila azy ireo avy amin'ny comune italiana misy ny razanao ianao ary koa ny firenena voajanahary. Mety ho sarotra ny fiarovana azy ireo amin'ny birao eo an-toerana, saingy tsy maintsy mividy azy ireo ianao amin'ny dingana. Ireo firaketana manan-danja navoakan'i Etazonia dia tsy maintsy ankatoavina, adika ary apetraka mba ho raisina ho ara-dalàna amin'ny dingana.
Manàna fanantenana mazava
Rehefa vita ny antontan-taratasinao dia afaka mangataka zom-pirenena italiana amin'ny fiaviana. Tsy maintsy mameno ny taratasy fangatahana ianao ary mandefa izany any amin'ny consulat italiana akaiky anao vao manomboka. Hanome fotoana anao handefasana antontan-taratasy sy hiseho amin'ny tafatafa izy ireo. Na dia dingana voalohany mankany amin'ny a pasipaoro faharoa, mila manana fanantenana mazava momba ny dingana sy ny fandaharam-potoana ianao. Mety haharitra herintaona ny fanendrena, arakaraka ny isan'ny fangatahana efa eo am-panaovana. Azonao atao ny mandinika ny fangatahana avy any Italia mba hanafaingana ny dia. Azonao atao mihitsy aza ny manangana trano fonenana ara-dalàna ao mandritra ny fotoana fikarakarana.
Miaraha miasa amin'ny manam-pahaizana
Tsara ny miara-miasa amin'ny manam-pahaizana momba ny zom-pirenena Italiana hanampy anao amin'ny dingana. Afaka mitarika sy manampy anao amin'ny dingana rehetra izy ireo, miantoka ny fandehanana milamina sy mora midina. Ny matihanina eo an-toerana dia manana karazana fifandraisana mety, noho izany dia mora kokoa ny maka ny antontan-taratasinao any Italia. Izy ireo koa dia hanao izay hahazoana antoka fa misy ny antontan-taratasy hafa rehetra ary tsy misy lesoka sy tsy ampy amin'ny fangatahana. Manome fahatokiana sy fiadanan-tsaina ihany koa ny fananana manampahaizana mitantana ny dingana.
Ny zom-pirenena amin'ny fiaviana no fomba mora indrindra hidirana any Italia sy hanombohana fiainana vaovao ao amin'ny tanin'ny razanao. Saingy ny dingana dia mety ho lava sy mampatahotra, indrindra raha mandehandeha tsy misy fahaizana matihanina ianao. Mifanome tanana amin'ny manam-pahaizana manokana, ary hahatratra ny tanjonao na dia alohan'ny andrasanao aza.